Apple inofanirwa kuvhara Michigan Apple Store zvakare nekuda kwedenda Ndinobva mac
Apple inofanirwa kuvhara Michigan Apple Store zvakare nekuda kwedenda
Rinoti pfuurei gore takarohwa nemuvengi mudiki asi ane hutsinye uyo atotora vanhu vanopfuura mamirioni matatu pasirese, denda iri rinoratidzika kunge riri kuita zvirinani, asi tinotarisana nezvipingamupinyi nguva zhinji. Hupfumi haukwanisi kumuka sezvazvinofanira nekuti mwero wehutachiona uchiri wakanyanya kwazvo. Izvi ndizvo zvakaitika kuMichigan uye nekuda kwechikonzero icho Apple Stores muguta rinofanirwa, zvakare, vhara zvachose.
Kunyangwe Apple isiri yeimwe yakanyanya kurohwa nedenda padanho rehupfumi, haisi iyo yakachengetedzwa zvachose. Apple Stores kutenderera pasirese yakavharwa kwenguva yakareba kudzivirira kupararira kweCoronavirus. Vashoma vaivhura, vamwe vaivhara, zvaitaridzika kuti nguva yaisazombosvika yekuti vese vavhure, zvirinani mune imwe nyika zvakazara. Asi izvi ndizvo zvakaitika munguva pfupi yapfuura muUK. Nekudaro, iyo US inoita kunge isiri kusvika padanho iro. Michigan inofanira kuvhara zvakare.
Yakazara kune mapoinzi matanhatu ekutengesa muguta ayo anofanirwa kuvhara zvakare. Chiyero "chenguva diki" nekuda kwezvazvino COVID-19 mamiriro mudunhu. Iyo Michigan chitoro chinyorwa simbisa kuti akavharirwa remangwana rinotarisirwa, pasina chinoratidza kuti vanozovhurazve ruzhinji. "Tiri kutora danho iri nekungwarira kukuru sezvo isu tichinyatso tarisa mamiriro acho uye tichivimba kudzosa zvikwata zvedu nevatengi nekukurumidza sezvazvinogona."
Vaya vaive nemusangano nerutsigiro rwehunyanzvi kana vaifanira kutora odha, vanogona kuzviita kusvika Kubvumbi 18. Zvisinei, kubva musi iwoyo hauzokwanisi kutenga paApple kana uri kuMichigan. Tichafanirwa kuramba tichive nemoyo murefu uye pamusoro pezvose musoro. Isu tinotarisira kupedzisa munguva pfupi uye kudzokera kunzvimbo yepamberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inofanirwa kuvhara Michigan Apple Store zvakare nekuda kwedenda
"Anti-bubble" diving masisitimu aishandiswa kutora firimu "Microworlds" paApple TV +
Chiyero chemidziyo inoenderana pamba, inotsigirwa neApple, ichave ichiwanikwa mukupera kwa2021